ICrocodile Hunter, uSteve Irwin ubulawe eneminyaka engama-44 | Martech Zone
I-Crocodile Hunter, uSteve Irwin wabulawa eneminyaka engama-44
NgoMvulo, Septemba 4, 2006 NgeCawa, ngoSeptemba 30, 2012 Douglas Karr
Ngoku ka Reuters, USteve Irwin wabulawa yi stingray namhlanje. Uvelwano lwam luphuma lusiya kusapho lakwa-Irwin nakwilizwe lonke lase-Australia- u-Irwin waba nefuthe elibi kwindalo esingqongileyo nakwindalo.
Ndiyathemba ukuba abantu abayithathi le ndlela ingeyiyo, kodwa ayothusi kum into yokuba yenzekile. Khange ndicinge, ekubukeleni umboniso wakhe, ukuba lo iya kuba ngumcimbi ka 'ukuba', ibingumbandela nje wokuba 'nini'. Ndide ndathetha notata kunye nonyana wam malunga nawo… ndandiwuthanda umboniso kodwa ndaziva ukuba u-Irwin uthathe umngcipheko omangalisayo.
I-Australia ilahlekelwe ngunyana omangalisayo nonemibala. - Inkulumbuso yase-Australia uJohn Howard
Ndikhumbula ndibukele omnye umboniso apho u-Irwin walunywa yinyoka angakwaziyo ukuyichaza kwaye bonke abasebenzi baphindela kwiimoto zabo ukuze babone ukuba ayinetyhefu na okanye hayi. Kwakungekho, kodwa kulapho ndaye ndagqiba ekubeni u-Irwin uthathe umngcipheko ongaphaya komntu oqhelekileyo. Njengoko ixesha lihamba kwaye uqhubeka nokuchasana nengozi, akunjalo ngokwemvelo ukuthatha umngcipheko omkhulu?
Ukuba akazange athathe le mngcipheko, ngewayengazange azise kangako kwinjongo yakhe njengoko wenzayo. Nangona kunjalo, andinakukunceda kodwa ndizibuze ukuba kufanelekile. Ngayiphi na indlela, u-Irwin ngoku ungumfel 'ukholo ngokusingqongileyo kunye nendalo. U-Irwin wabulawa sesona sizathu asithandayo kwaye waphila ukuze afundise umhlaba malunga.
Inkulumbuso yase-Australia uJohn Howard usenokuba wayichaza kakuhle le ntlekele, esithi "I-Australia ilahlekelwe ngunyana omangalisayo nonemibala."
Ukuhlaziywa: Iindaba zeSidney
Ngamanye amaxesha ndiyazihlekisa!
Sukukutyeshela ukuthobela, ukuhambelana, kunye neNkqubo elungileyo